eNasha.com - १२ हजार वर्षअघिको कुरा
यी निर्देशकले इण्डिपेन्डेन्स डेमा सुदूर भविष्यको कथा गढेका थिए, जसमा पृथ्वीबासीभन्दा शक्तिशाली प्राणीले पृथ्वी (अमेरिका) मा आक्रमण गर्छन् र पूरै विश्व (अमेरिका) ध्वस्त बनाउने ध्याउन्नमा हुन्छन् । तर यहाँ जाँबाज् सेनाहरुको कुनै कमी छैन, विल स्मिथ आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर विश्व (अमेरिका) ध्वस्त हुनबाट जोगाउँछन् । सन् १९९६ मा बनेको यो चलचित्रमा प्रयुक्त आँखै चम्काउने स्पेशल इफेक्ट, खतरनाक द्वन्द्व दृश्य र तिनमा प्रयुक्त सही मानवीय संकटले यो चलचित्रलाई साँच्चिकै दर्शनीय बनाएको थियो । तथापि केही आलोचकले यस चलचित्रलाई अमेरिका नै विश्वका रुपमा चित्रित गरेकोमा भने उति रुचाएका थिएनन् ।
यो आलोचनाले होला यी निर्देशकले निकै पछि अर्को चलचित्र "द आफ्टर टुमरो"मा वैश्विक समस्यालाई उजिल्याए । त्यो थियो, ग्लोबल वार्मिङ । पृथ्वीको ग्रीन हाउसमा परेको असर, त्यसले पर्यावरणमा आएको परिवर्तन र त्यो परिवर्तनले ल्याएको मानवीय संकट । एमिरिकले यस चलचित्रलाई अलि फराकिलो अर्थमा प्रस्तुत गरे, जस्तो कि नयाँ दिल्लीमा ग्लोबल वार्मिङका बारेमा गम्भीर बहस हुँदै गर्दा जापानमा ठूल्ठूला असिना पानी बर्सिन्छ र त्यहाँ दर्जनौँ व्यक्तिहरु ठहरै हुन्छन् । अन्र्टार्कटिका महादेशमा आएको सानो हलचलले पछि न्यूयोर्क शहर ध्वस्त हुन्छ र आधा अमेरिका मेक्सिकोमा शरण लिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता चौतर्फी समस्या देखाएका कारण धेरैका लागि यो बहसयोग्य चलचित्र बन्न सफल भएको थियो ।
तर यो के भयो ? यी निर्देशकले संसारभरका अन्य थुप्रै समस्यालाई थाती राखेर एकै झमटमा उनी १२ हजार वर्ष पहिलेको समयमा पुगे, जहाँ भर्खर एउटा सभ्यता चरममा पुगेर अर्को जंगली पुस्ता खेती गर्न सिक्दैथियो । तर त्यसबेला पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ थिए, मानिसहरु दास थिए । तिनीहरु कसैको पिरामिडे लहडका लागि समातिन्थे, यातना दिइन्थे र एउटा सभ्यता बनाउँथे । संसारमा भएका सबैजसो सभ्यताका पछाडि एउटा गहिरो शोषण, पीडा, उत्पीडन र अभावको कथा हुन्छ । निर्देशक इमिरेकले त्यसैलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका छन् । तर के उनले पाएको यो अवसर साँच्चिकै उनले सदुपयोग गरे त ?
यो कथा एउटा साधारण डुलन्ते समाजको अगुवा डिलेको हो । जसका सामु एउटा पूरै कस्बाको जिम्मेवारी छ । यो कस्बालाई उसले ख्वाउनु/प्याउनुदेखि बेलाबेलामा आफूहरुभन्दा शक्तिशाली कस्बा र सभ्यतावालाहरुसँग पौँठेजोरी खेल्दै तिनको रक्षा गर्नु हो । उसको कस्बामा ऊ त्यतिबेला चर्चामा आयो, जब उसले आफूभन्दा खतरनाक र कैयौँ गुणा शक्तिशाली म्यामथ (हात्ती)लाई मार्न सफल भयो । ऊ आफूलाई उति शक्तिशाली मान्दैनथ्यो, तर पनि हात्ती मर्यो र उसलाई सबैले मान्न थाले । आफूलाई एउटा साधारण व्यक्तिका रुपमा चित्रित गर्न रुचाउने डिलेका सामू पछि यस्ता खतरनाक घटनाहरु आइपुग्छन्, जसलाई उसले शरीरले भन्दा इच्छाशक्तिले जित्नुपर्ने भयो ।
उसको इच्छाशक्तिलाई मलजल गरेकी थिई, उसकी सानैदेखिकी प्रेमिका एभिलोटले । अकस्मात एभिलोटलाई कथित सभ्यतावाला व्यक्तिहरुले अपहरण गरेर लैजान्छन् । आफ्नी प्रेमिका खोज्दै ऊ त्यस ठाउँमा आइपुग्छ, जहाँको चरम विकास देखेर ऊ मात्र होइनन्, स्वयम् दर्शक पनि चित् खान्छन् ।
त्यसो त हिन्दी चलचित्र नै हाम्रा लागि विश्वविद्यालय भएकाले यसमा भएका इमोशन र परिवारवाद उति नौला लाग्दैनन्, तर नौलो बनाउन निर्देशक इमिरेकले यस चलचित्रलाई यति भव्यतम् बनाइदिएका छन् कि हामीजस्ता साधारण दर्शक टाउको कन्याउन बाध्य हुन्छौँ । र, चलचित्रले उत्पन्न गर्ने थ्रिल यति विघ्न साधिएको छ कि घरिघरि मुटु कमाउन सफल हुन्छ ।
तर के यो सर्वोत्कृष्ट चलचित्र हो त यस विधाको ? यस विधालाई केही चलचित्र समीक्षकहरुले 'ओढारे मानवहरुको वीरगाथा'का रुपमा चित्रित गर्न रुचाउँछन् तर यसलाई सर्वोत्कृष्ट चलचित्र मान्न रुचाउँदैनन् । यस विषयमा सन् १९६० मा नै गरिएको प्रयास बरु सर्वोत्कृष्ट थियो भन्ने उनीहरुको भनाइ छ । तर हामी एउटा साधारण दर्शक भएर हेर्दा पनि यी निर्देशकका अघिल्ला प्रस्तुतिहरुमध्ये माथि उल्लेख गरिएका दुइ चलचित्रसँगै गोड्जिला पनि भयंकर रोचक थियो भन्न सक्छौँ । यस्तै प्राचीन विषयमा बरु निर्देशक तथा कलाकार मेल गिब्सनले दुइ वर्षअघि बनाएको चलचित्र "एपोक्लिप्टो" ज्यादै रोचक र मानवजीवन निकट रहेको मान्न सकिन्छ । जङ्गली अवस्थामा रहेका मानवहरुको जीवनको सबैभन्दा हिंस्रक पक्षलाई निकटतम् तरिकाले मेल गिब्सनले देखाएका थिए, त्यस चलचित्रमा । अनि यहाँ चाहिँ बढी मानवीय मूल्य र मान्यतालाई ठाउँ दिइएको छ । जुन त्यसबेलाको मानव चरित्र होइन भन्ने भनाइ सामाजिक चिन्तकहरुको छ । सामाजिक चिन्तकहरु भन्छन्- "यो सिनेमामा मेसिन युग, खेती युग र ओढारे युग एकै पटक उत्पन्न भएको हो भन्ने भनाइ राख्दछ, जुन कदापि सही होइन । खेती युग त म्यामथ र डायनाशोरहरुको अन्त्य गराउने 'आइस एज' पछिको विकास हो ।"
उसो भए यो चलचित्र के का लागि हेर्ने त ?
मात्र दिमाग खाली गर्नुस् र आफूले पढ्नु भएको सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजी बिर्सनुस् । अनि, जंगली अवस्थामा पनि कसरी सिनेमाले भव्यता पाउन सक्छ भनेर इन्जोय गर्नुस् ।